युगसम्बाद साप्ताहिक - विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक्�
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक्�
Monday, 04.22.2013, 06:53pm (GMT+5.5)
० पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चारपटकसम्म कु गर्ने प्रयास गरेको भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो । तपाईं लामो समयदेखि राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको नेताका हैसियतले डा. भट्टराईको कथनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सन्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई के भन्नुपर्छ भने– उहाँले आफ्नो ऐना सर्वप्रथम हेर्नुपर्छ । विदेशीको सहयोगमा उहाँले नेपालमा विद्रोह गरेर आउनुभएको हो । राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिनुपर्ने थियो तर नदिएको हुनाले राष्ट्रपतिका जायज र संविधानप्रदत्त सुझावलाई उहाँले ‘कु’ भन्नुभो । यदि साँच्चै नै देश जोगाउनका लागि दुई वर्ष अगाडि नै राष्ट्रपतिको हातमा सत्ता सुम्पनुपथ्र्यो र देशलाई एउटा निकास दिनुपथ्र्यो । ‘कु’ भनेको सैनिक विद्रोह हो । डा. भट्टराई नै विदेशीको आड भरोसामा सशस्त्र युद्ध गरेर सत्तामा पुग्नुभएको हो । त्यसकारण डा भट्टराईले आफ्नो ऐना हेरेर राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको म सम्झन्छु ।
० यहाँको भनाइ राष्ट्रपति सक्रिय भएर सत्ता हातमा लिनु जरुरी थियो भन्ने हो ?
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले लेखेर दिएको भएदेखि आज यो गैरराजनीतिक मान्छे, पूर्व सचिवहरू राखेर कर्मचारीतन्त्रको सरकार नेपाली जनाले भोग्नुपर्ने थिएन । बाबुराम भट्टराईका र अरु पार्टीहरू यसरी पत्रु बन्नुपर्ने थिएन ।
० डा भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट कु गर्ने प्रयास भएको थियो भन्नुको आधार र कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
मैले बुझेको त राष्ट्रपतिजीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको र प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनु भएको थियो होला । यसलाई उहाँले कुको रुपमा बुझ्नुभयो । डा. भट्टराईले शासन चलाउन नसकेको कुरा अहिले सावित भएको छ । मैले त दुई वर्ष अगाडि नै अब यसरी देश चल्दैन, राजनीतिक पार्टीहरू सक्षम भएनन् त्यसकारण राष्ट्रपति शासनमार्फत देशले निकास पाउनुपर्छ भनेको हुँ । अहिले जुनसुकै आरोप लगाए पनि डा. भट्टराई र अरु पार्टीहरूले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर आफ्नो नालायकीपन छोप्न सक्नुहुन्न ।
० राष्ट्रपतिले सामान्य मुख खोल्दा त यत्रा आरोपहरू आउँछन् भने शासन सत्ता नै लिएर विथोलिएको राजनीतिलाई राम्रो बनाउछु भन्न खोज्दा परिस्थिति अर्कोतिर मोडिन सक्दैन ?
यस विषयमा मैले पहिले पनि भनेकै थिएँ । जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, जसले अत्याचार गरेका छन्, जसले देशको ढुकुटी आफ्ना मान्छेहरूलाई बाँडेका छन्, देशलाई १० वर्षसम्म पंगु बनाएर स्थानीय निकाय समाप्त पारेका छन् । उनीहरूकै स्वर चर्को छ । अहिले जिल्ला जिल्लाबाट करोडौं करोडको अनियमितताका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी सबैको दोष यी ठूला भनिने पार्टी र माओवादीले लिनुपर्छ । आफ्नो अकर्मण्यता र आफूले गरेको विध्वंशको दोष राष्ट्रपतिलाई देखाएर कु शब्द प्रयोग गरेर कसैलाई धोका दिन सक्दैनन् । कु तिनीहरूले गरेका हुन् जसले विदेशीको आड भरोसामा शासन सत्तामा आएर देशलाई वर्वाद पारेका छन् । सचेत पार्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । हामीले संविधान निर्माण गर्दा त्यही कुरा खोजेर राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू अयोग्य भएपछि “मैले त सकिन राष्ट्रपतिज्यू” भनेर दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने नगरेको हुनाले देश अहिले वर्वादितिर गएको छ ।
० यो स्थितिमा निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनले निकास दिन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
एमाओवादीसंग हामी सबभन्दा ठूलो पार्टी भन्ने धङधङी छ । अब फेरि त्यति नै सिट नआउला भन्ने डर उनीहरूलाई छ । एमाले नेता माधव नेपालकै कुरा सुन्ने हो भने एमाओवादी नै निर्वाचन चाहँदैन । केही गरी निर्वाचन भयो र सोचेजस्तो विजय हाँसिल नहोला भन्ने डरले एमाओवादी नेताहरू चुनावसंग डराइरहेका छन् । यसलाई पुष्टि हुने गरी एमाओवादी नेताहरूले असारमा गर्ने भए गर हैन भने चुनाव गर्न दिन्नौं भन्दैआएका छन् । हुनै नसक्ने समयमा चुनाव गर भनेर भन्नुको अर्थ चुनाव नचाहेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
० यहाँको कुरा सुन्दा त नेपाली जनताले झन् अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ हो ?
नेपाल र नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्न खोजिंदैछ । १० वर्षको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा देशका पूर्वाधार ध्वस्त पारियो त्यसको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पनि भएको छैन । आफू शासन सत्तामा भएका बखत त्यसको सबै बन्दोबस्त एमाओवादीले गर्नुपर्ने थियो । हिजोको सरकारले जनताको सेवा गर्न सकेन भनेर विद्रोह गरिसकेपछि आफ्नो हातमा शासन सत्ता आएका बेला सबै गरेर देखाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न नसकेपछि माफी मागियो तर कति माफी मागे कति ? माफी माग्दैमा सबै माफ हुन्छ ? देश र जनतालाई त्यत्रो भड्खालोमा पारिसकेपछि कमसेकम आफू राजनीतिबाट अलग हुनुपथ्र्यो, अरुलाई सहयोग गर्नुपथ्र्यो । नैतिकताले यही भन्छ । जुनसुकै सिद्धान्तको नैतिकता पनि योभन्दा बाहिर जान सक्दैन ।
० त्यसै भएर प्रशासकहरूको नेतृत्वमा चुनाव गराउने भनेर सरकार गठन भएको छ । यसबाट पनि निकास आउने कुनै आशा देखिंदैन त ?
पूर्व प्रशासकहरूको सरकार बनाएपछि उनीहरू जनताप्रति पनि जिम्मेवार छैनन् र पार्टी तथा संसदप्रति पनि जिम्मेवार छैनन् । यस्तो परिस्थिति ल्याउने जिम्मेवार त डा बाबुराम भट्टराई नै हुन् नि । समयमै चुनाव गरिदिएको भए, पार्टीहरू मिलिदिएको भए यस्तो स्थिति त भोग्नैपर्ने थिएन । अरुलाई, राष्ट्रपतिलाई दोष देखाएर उहाँ उम्कन सक्नुहुन्न ।
कतिपय अवस्थामा कु नै भए पनि त्यसले राम्रो अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । संसारका धेरै सैनिक विद्रोह ठीक थिए । हरेक सैनिक विद्रोह प्रतिक्रियावादी नै हुन्छ भन्ने होइन । कति सैनिक विद्रोह क्रान्तिमा परिणत भएका छन् । राष्ट्रपतिले कु गर्न खोजेको भन्ने उहाँहरूले के राम्रो काम गर्नुभो ? कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा राखेर देशका नदीनालाहरू विदेशीलाई दिनुभो, विदेशी पूँजी ल्याउने सबै कानुन ल्याउनुभो, पुराना राम्रा ऐन कानुनहरूलाई मास्नुभो । उहाँले के राम्रो काम गर्नुभो र अरुलाई आरोप लगाएर चोखो बस्न सक्नुहोला ? आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई थामथुम पार्नसक्नुहोला तर माक्र्सवाद बुझेका आलोचकहरूलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न ।
० त्यसो भए निर्वाचन हुन पनि सक्दैन र निर्वाचन भएन भने पनि सरकारले हैन, दलहरूले नै गाल पाउने भए हैन ?
पार्टी र नेताहरूको भाषा अनुसार जातजाति र भाषाभाषीका आधारमा संघ राज्य बनेन भने, एक मधेश एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार दिइएन भने चुनाव हुन सक्दैन । पहिले नै यस्तो संविधान बनाउने भनेर खाका कोरिसकेपछि अनि चुनाव गराउने भनेर भनिसकेपछि यसको मतलब के हो ?
० सुन्दैमा पनि आश्चर्य लाग्ने राजनीति चलिरहेको छ तैपनि ठूला भनिएका दलहरू कसरी टिकिराखेका छन् र उनीहरूकै रजाइ किन चलिरहेको होला ?
यसबारे त मैले धेरैचोटि भने । हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पैसाले पालिएका, नेताका गुनले बाँचेका हुनाले उनीहरूले आआफ्नो पार्टीभित्र रहेर विद्रोह गर्न सक्दैनन् । साथसाथै ती पार्टीहरू पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपले विदेशीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्दैआएका छन् । त्यसकारण जहिलेसम्म कुनै एउटा विदेशी शक्तिले भनेको जस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन तवसम्म चुनाव हुँदैन । संविधानसभा भंग हुनुको कारण पनि त्यही हो । मैले माथि नै उल्लेख गरे जस्तो संविधान नबन्ने भए संविधानसभाको चुनाव हुन दिन्न भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो । यदि पहिले नै संविधानका निर्णय गरेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने हो भने त्यस्तो चुनावको के आवश्यकता ? मैले त्यही देखेर नै संसद्को मात्र चुनाव गरौं भनेको हुँ । पहिले नै संविधान यस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्नु त तानाशाही हो ।
० तपाईंले जे भन्नु भए पनि कांग्रेस–एमाले त चुनावका लागि तयार छन् नि ?
कांग्रेस–एमालेको त कुनै दृष्टिकोण नै छैन । चार वर्ष अगाडि नै नेताहरूलाई भेटेर मैले खबरदारी गरेकै हुँ कि तपाईंहरूको पार्टीमा यस्तो छ” भनेर । नागरिकताको अधिकारकै कुरा गर्नुस् न । महिलालाई समान अधिकार दिने भन्दै भाञ्जाभाञ्जीलाई समेत नेपाली नागरिक बनाउने काम गरियो । उहाँहरूले हरेक कुरालाई चानचुन सम्झनुभो र आफूहरूले गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नुभो । बाहिरबाट धेरै प्रभाव पारेको छ भन्ने सोच्नुभएन । मैले चार वर्ष अगाडि नै देखाइदिएको दैलो उहाँहरूले भर्खर देख्दै हुनुहुन्छ । स्थिति यो हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ठूला पार्टी र सरकारमा जाने पार्टीको नाताले जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यस्तो छैन । उहाँहरूको दृष्टिकोण सत्तामा जाने, मनलाग्दी गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँड्ने काममा मात्र सीमित रह्यो । यसैको सिको माओवादीले पनि गरे । राज्यको ढुकुटीलाई उपयोग गर्ने हैन कि दुरुपयोग मार्फत हाम्रो देश खाल्डोमा गएको हो । यसको दोष अरु कसैलाई जाँदैन शासक दल भएका यी चार दललाई मात्र जान्छ । उहाँहरूले हामीले सकेनौं भनेर राजनीति कर्मचारीको हातमा छाडिदिएपछि अहिले आएर बढ्ता कुरा किन गर्ने ? सारा संसारका सामुन्ने असफल भैसकेका मान्छेहरूले अलिकति लाज त मान्नुपर्ने हो ।